Douglas Karr | Pejy 2 amin'ny 539 | Mpanorina ny Martech Zone
Talata, Jolay 6, 2021 Talata, Jolay 6, 2021 Douglas Karr
Ny zanako lahy dia mila karatra fandraharahana ho an'ny orinasam-pamokarana DJ sy mozika (eny, saika nahazo ny Ph.D. amin'ny matematika izy). Mba hitsitsiana toerana rehefa mampiseho ny fantsona sosialy rehetra ao amin'ny karatry ny orinasany dia te-hanome lisitra madio amin'ny fampiasana ireo sary masina isaky ny serivisy izahay. Raha tokony hividy ny tsirairay amin'ireo logo na fanangonana avy amin'ny tranokala sary izahay dia nampiasa Font Awesome. Font Awesome dia manome anao sary masina azo ovaina afaka
Alakamisy, Jona 10, 2021 Alakamisy, Jona 10, 2021 Douglas Karr
Araka ny efa nampoizina dia niova ny vintana amin'ny tsena aorian'ny COVID. Ary hatreto dia toa mazava fa nifindra ho an'ny tompona trano sy ny mpampiasa vola. Raha mbola mitombo ny fangatahana fijanonana mandritra ny fotoana fohy kokoa sy trano honenana, na iza na iza manana adiresy — na trano fialan-tsasatra feno izany na efitra fatoriam-pialan-tsasatra fotsiny — dia tsara toerana hitrandrahana ny fironana. Raha mikasika ny fangatahana fanofana maharitra, dia tsy misy farany izany. Ankoatr'izay, tsy misy famatsiana ao
Manana namako iray izay mamolavola sy mandoko ny rindrina amin'ny rindrina ary manao asa mahatalanjona. Na dia fampiasam-bola tsy mampino aza ity zavakanto ity izay afaka manova ny sehatr'asa na ny toerana fivarotana, ny fahaizana mandrafitra sy mandoko sary marindrano amin'ny habaka mitsangana dia navela hamehezana ny fametrahana na ny mpanakanto. Teknolojia fanontana vaovao no nipoitra izay hanova an'io, na dia… mpanonta rindrina mitsangana aza. Ny mpanonta rindrina Ny avo indrindra farany an'ny mpanonta rindrina